यौन सम्पर्क गर्दा गर्दै ज्यान गुमाउने प्रसिद्ध व्यक्तिहरू; अमेरिकी राष्ट्रपतिदेखि ब्रिटिश प्रधानमन्त्रीसम्म ! - Everest Dainik - News from Nepal
यौन सम्पर्क गर्दागर्दै ज्यान जानु ! यो असामान्य लाग्ने अभिव्यक्ति, अचम्म लाग्दो र अपत्यारिलो ! तर यस्तो भएको छ । सामान्य मानिस मात्र हैन कयौं प्रसिद्ध व्यक्तिहरू समेतले यौन सम्पर्कका क्रममा ज्यान गुमाउनु परेका उदाहरण छन् ।
हुन त मृत्यु टार्न नसकिने सत्य हो । तर सबै मृत्युहरूको लामो समयसम्म चर्चा हुँदैन । केही असामान्य मृत्युहरू भने सजिलै चर्चा बटुल्न सफल हुन्छन् । र, यदि यस्तो मृत्यु यौन सम्पर्क गर्दा गर्दै भएको रहेछ भने यसबारेमा चर्चा हुनु स्वाभाविक नै हो ।
आज हामीले केही प्रसिद्ध व्यक्तिहरूको मृत्युबारे जानकारी एकत्रित गरेका छौं जसले यौन सम्पर्कका क्रममा ज्यान गुमाएका थिए । यस सूचीमा अभिनेता, संगीतकार र राजनीतिज्ञहरू त समावेश छन् नै थुप्रै धर्मगुरुहरूसँग समेत यस्तो दुर्घटना भएको छ ।
पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति फ्र्यांकलिन डी रुज्भेल्टले आफ्नी प्रेमिकाको अँगालोमै अन्तिम पटक सास फेरेका थिए । त्यस्तै प्रसिद्ध गिटारिस्ट जोन इनट्विस्टल २००२ मा स्ट्रीपरहरूसँग रमाइलो गदागर्दै अत्यधिक कोकिन सेवनको कारणले ज्यान गुमाउन पुगेका थिए ।
पढौं केही प्रसिद्ध व्यक्तिहरू जो यौनक्रिया गर्दागर्दै ज्यान गुमाउन पुगे:
फ्र्यांकलिन डी रुजभेल्ट
संयुक्त राज्य अमेरिकाका ३२ औं राष्ट्रपति रुजभेल्ट, चार-चार चोटी अमेरिकाको राष्ट्रपति निर्वाचन जितेको कीर्तिमान बनाएका रुजभेल्ट, र ती रुजभेल्ट जो दोस्रो विश्वयुद्धमा प्रमुख विश्वनेताका रूपमा उदाए, तिनको मृत्युको बारे पनि भनिन्छ उनी आफ्नी केटी साथी लुसी मर्सरसँगै रासरङ्गमा व्यस्त थिए ।
उनको मृत्युको समय दोस्रो विश्वयुद्ध चलिराखेको थियो, त्यसैले राष्ट्रपतिको कम्जोर स्वास्थ्यको बारेमा कुनै पनि कुरा बाहिर आउँदैन थियो । तर पछि प्रकाशित दस्तावेजहरूमा भने यस्तो खुलासा भएको हो ।
संयुक्त राज्य अमेरिकाका ४१ औं उपराष्ट्रपति र विश्वकै सर्वाधिक धनाढ्य परिवारमध्ये एकका वंशज तथा स्ट्याण्डर्ड ओइलका संस्थापक जोन डी रकरफेलरका नाति नेल्सन रकरफेलरको मृत्युबारे सुरुमा परस्पर विरोधी समक्चारहरू आएका थिए ।
सन् १९७९ को जनवरी २६ मा अकस्मात उनको मृत्यु भएको समाचार आएपछि सुरुमा आएको समाचारमा उनी आफ्नो कार्यालयमा एउटा पुस्तकमाथि कम गरिराखेको बेला सुरक्षाकर्मीले उनलाई डेस्कमाथि घोप्टिएको अवस्थामा फेला पारेको भनेर उल्लेख थियो ।
रकफेलर र मेगन
तर केही समयपछि भने वास्तविक तथ्य खुलेर आयो । ७० वर्षीय रकरफेलर आफ्नी सहयोगी २५ वर्षीय सुन्दरी मेगन मारसाकसँग आफ्नो नीजी कार्यालयमा एक्लै समय बिताइरहँदा उनलाई हृदयघात भएको समाचार सार्वजनिक भएपछि भने यस चर्चाले अर्कै मोड लियो । उनी बेहोस भएर ढलेको केही समयमै त्यहाँ पुगेको चिकित्सा टोलीले उनलाई ओछ्यानमा खाली खुट्टा पल्टिएको अवस्थामा भेटेको थियो ।
याे पनि पढ्नुस यौनसम्पर्कपछि किन हुन्छ एलर्जी ?
पोप लियो सप्तम
हुन त भ्याटिकन सिटीमा बस्ने रोमन क्याथोलिक इसाई धर्मका सर्वोच्च गुरु पोपलाई यौन आचरणबाट टाढै बस्नुपर्ने मान्यता रहेको छ । तर यति हुँदा पनि चार जना पोपहरूकोप मृत्यु नै यौन्क्रियाका क्रममा भएको बताइन्छ ।
हुन त सन् ११३९ सम्म पोप बन्नका लागि ब्रह्मचर्य अनिवार्य सर्त थिएन । लियो सन् ९३६ मा पोप बनेका थिए र उक्त समय रोमन क्याथोलिकहरू मुसलमानहरूसँग धर्मयुद्ध लडिराखेका थिए । ९३९ मा यौनक्रियाको क्रममा उनको ज्यान गएको थियो ।
पोप जोन १२ औं
पोप जोन १३ औं
पोप पउल द्वितीय
याे पनि पढ्नुस यौन तथा प्रजननसम्बन्धी जानकारी दिन सरकारले सार्वजनिक गर्यो मोबाइल एप्स
फिलिप द्वितीय; ड्युक अफ ओर्लेयन्स
फिलिप द्वितीय फ्रान्सका राजा लुई पन्ध्रौँका नायब थिए । सन् १७२१ मा उनी आफूभन्दा ३० वर्ष कान्छी पत्नीका अँगालोमा रहेका बेला उनको ज्यान गएको थियो । उनलाई हृदयघात आएको मानिन्छ ।
१८५९ मा संयुक्त अधिराज्यका प्रधानमन्त्री बनेका हेनरी जोन टेम्पल पाल्मरस्टोनका तेस्रा भिस्काउन्ट बनेपछि लर्ड पाल्मरस्टोन भनेर चिनिन थाले । १८६५ मा उनी बिलियार्ड टेबलमा एक जना सुसारेसँग संसर्गको क्रममा उनलाई हृदयघात भएको थियो । उनी बहालमै निधन भएका अन्तिम ब्रिटिश प्रधानमन्त्री पनि हुन् ।
ट्याग्स: crazy sex, death during sex, Sexual Healht